Mirehitra i Madagasikara – i am a malagasy in genève
30 octobre 2006 13 juin 2007
Mirehitra i Madagasikara
– Ambatolampy, Tsiroanomandidy [22|08|2006, tafo 27, fianakaviana 24 tsy manankialofana],
– Ambararata, Befandriana-Nord [28|08|2006, tafo 29, olona 100 tsy manankialofana],
– Elarina-Manambaro, Taolagnaro [01|09|2006, tafo 29, fianakaviana 34 tsy manankialofana],
– Vatomandry [Oktobra, tafo 51, olona 180 tsy manankialofana],
– Ambalafarihy, Antsirabe II-Mandritsara, Sofia [08|09|2006, tafo 30, olona 98 tsy manankialofana],
– Ambetaimborona, Mampikony [01|10|2006, tafo 36, olona 220 tsy manankialofana],
– Vohipeno [14|10|2006, tafo 39, olona 239 tsy manankialofana],
– Mananjary [14|10|2006, tafo 145, olona 500 tsy manankialofana].
– Ambohitranala, Marolambo, Toamasina [18|10|2006, tafo 452, olona 1998 1993 tsy manankialofana]
Inona kosa ary no ataon’ireo mpamono afo [pompier] ?
Ny ankamaroan’ny tanàna dia tsy mahalala akory izay fisian’ny mpamono afo. Hoan’ny tanàna ambiny kosa izay efa iorenan’ny toby [caserne de pompier] dia ny fiara matetika no tsy ampy kojakoja ka tsy azo ampiasaina. Antsirabe ohatra, izay tanana faharoa lehibe indrindra any Madagasikara amin’ny isan’ny mponina dia simban’ny afo tamin’ny alin’ny Zoma mifoha Asabotsy 28 Oktobra 2006 lasa teo ny tobin’ny mpamono afon’Antsirabe [Voirie], ary fiara avy any amin’ny Orinasa Cotona no namonjy tao.
Any Antananarivo indray raha misy fiara azo ampiasaina ao amin’ny toby dia ny vazivazy ratsin’ny olona [98%-n’ny antso finday] no manembatsembana ny asan’ny mpamono afo.
Raha ny fanampiana ireo tsy manankialofana amin’ny fanarenana sy fanamboarana ny simba indray no asiana resaka dia mijoro ihany ny Comité National de Secours [CNS, Antananarivo, MD] sy ireo solontenany any am-paritra Comité Local de Secours [CLS] saingy tsy tafita ny fampitam-baovao sy ny fifandraisana ka matetika no tsy tonga ara-potoana any an-tsofin’ireo mpiandraikitra ireo tatitra voina [ohatra Berentina, Mandritsara].
Farany, ho fanazavana ireo voina ireo dia tsy ampy ny fanambaran’ireo expert aty Antananarivo fa tsy ampy fitandremana ny vahoaka Malagasy, tsy manaja ny fepetra ireo trano miorina, rehefa trano 452 no indray kilan’ny afo, tanàna iray manontolo no indray manjavona. Izaho dia mino fa ireo izay may trano, ireo izay may tanàna, ireo izay namoy mpiara-monina, dia nanao izay ho afany. Tokony handray ny andraikiny sy hanao ny asany amin’izay ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany.
matoandahantsoratra sahala www.les-nouvelles.com >>
Posté dans tsetsatsetsapar tomavana3 commentaires
3 réflexions sur “Mirehitra i Madagasikara”
Ping: Miverina mirehitra indray ireo tanàna | Malagasy maro tsy manankialofana [Mahanoro, MD] « malagasy
← Toeram-pitsaboana manaja mpiavy [CH]
06|11|03 – Fanosorana Mpitandrina [Lausanne, CH] →